Kubuntu 11.10 Beta1 oo loo heli karo soo dejinta | Laga soo bilaabo Linux
Kubuntu 11.10 Beta1 ayaa diyaar ah oo laga soo dejisan karaa
Waxay ahayd saacado kooban Ubuntu 1 Beta11.10 ayaa diyaar u ah soo dejinta, laakiin Ubuntu ma aha 'wax soo saarka' kaliya ee Canonical, ah Kubuntu 1 Beta11.10 🙂
Sida caadiga ah, noocyada Alfaallada ku dar xulashooyinka cusub, isbeddelada la taaban karo ee codsiyada, halka noocyada Betas xaaladaha intooda badan, waxay daryeelaan xalinta cayayaanka si loo wanaajiyo xasilloonida qashinka.
Tanina maahan mid ka reeban, iyadoo tan hore ee Beta dhowr ciladood la saxay, kooxdu waxay si buuxda isugu xilsaartay nadiifinta iyo hagaajinta Kubuntu 11.10, hase yeeshee ogeysiis rasmi ah Waxay kugula talinayaan in AANAN ku isticmaalin noocyadan jawiga wax soo saarka, maxaa yeelay weli si buuxda uma xasilloon.
Si aad u soo dejiso Kubuntu 11.10 Beta1 CD halkan waa isku xirka: LINK
Si kastaba ha noqotee waad tijaabin kartaa hagaajinta adigoon ka rarin xoqida, halkan waxaa ah tilmaamaha lagu cusbooneysiinayo nidaamkaaga: LINK
Isbedelka ugu weyni waa dhab, inuu mar horeba la yimaado KDE 4.7, iyo dabcan, oo leh hagaajinta noocyadan cusub ee KDE la yimaado. Waa kuwan faahfaahin qaar sida aan u maleynayo ay yihiin kuwa ugu xiisaha badan / muhiimka ah:
Cusub (shaqsiyan anigu uma arko mid cusub, laakiin xoogaa horumar ah) astaanta astaanta ogsijiin.
Naqshad hoomboro (biraawsarka faylka) nadiifiye.
Gwenview (daawadayaasha sawirada) hadda waxaad leedahay awood aad u fiican oo aad isbarbar dhigi karto sawirrada.
El boostada macmiilka KMail sii deynayaa horumarinno badan, maadaama ay horeyba ugu jirtay nooc cusub. Isaga muuqaalka muuqaalka waxay noogu muuqan kartaa inaanan waxba iska beddelin, hase yeeshee "gadaal" waxaa jira isbeddelo, gaar ahaan inay hadda si buuxda u isticmaaleyso Akonadi. Tani waa isbeddel la taaban karo, sidaa darteed waxaan kugula talinayaa inaad sameyso keydka emaylkaaga, xiriirada iyo jadwalka taariikhda kahor intaadan cusbooneysiin.
Waan haysan doonaa Amarok Nooca 2.4.3, asal ahaan hagaajinta (waxaa lagu sharaxay qaab fudud) waxay noqon laheyd in hada qaabkaan, marka lagu daro hagaajinta cilladaha, waxay leedahay iswaafajin fiican iyo taageero lagu ciyaaro feylasha la wadaago ee shabakada (la wadaago Samba tusaale ahaan), iyo sidoo kale taageero loogu talagalay gpodder.net
Ugu dambeyntii, way kacdaa KPackageKit wayna muuqataa Suunka Muon. Dhibaatada ugu weyn ee leh KPackageKit ayaa ah in AANAN AHAAHAY ugu horayn loogu talagalin khalkhal ku saleysan Debian (si fiican uma isticmaalo dpkg), halka Muon Suite lagu horumariyey iyada oo maanka lagu hayo Debian iyo waxyaabaha ka dhasha. Waxaa jiri doona is waafajin wanaagsan, ikhtiyaarro ka wanaagsan, si fudud loo dhigo: Halkan waxay ku dhufteen ciddiyaha madaxa, waana isbeddel ay adeegsadayaasha Kubuntu ku hamiyayeen muddo dheer.
Wixii faahfaahin dheeraad ah ee Suunka Muon, iyo sidoo kale isbeddelada Kubuntu 11.10 lagu yaqaanay inay muddo dheer haysatay, booqo qormooyinkan: LINK1 | LINK2
Intaa waxaa dheer, faahfaahin badan oo dheeraad ah oo ku saabsan horumarin lagu sameeyay Plasma, iyo sidoo kale gudaha codsiyada aasaasiga ah in aan u isticmaalno KDE.
Si kastaba ha noqotee, kani waa nooca Beta oo keliya, waxaa jira cilado ama dhibaatooyin ay horumariyayaashu yaqaanaan oo ay ka shaqeynayaan xallintooda, waxaan uga tagayaa midka inta badan dareenkeyga qabta:
qaansada #838325: kubuntu-buuxda ma rakibiyo dhammaan codsiyada, xalka gacanta ee isticmaaluhu isticmaali karo ayaa ah inuu ka soo rakibo terminaalka «kubuntu-desktop»Iyo«kubuntu-buuxda«
Oo kanuna wuxuu ahaan lahaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Kubuntu 11.10 Beta1 ayaa diyaar ah oo laga soo dejisan karaa
Anigu ma ahi taageere Akonadi, runti way i dhibtaa (isla sida Nepomuk) haha, markaa hadda waxaan ku arkaa KMail si aan raaxo lahayn, waxaan ahay qof aad u faraxsan oo ku qanacsan isticmaalaha Thunderbird, laakiin KMail wali wuu ila fiicnaa (xaqiiqda darteed) inuu noqdo Qt).
Laakiin ... hadda tan oo ah 100% Akonadi, sinaba uma isticmaali doono.
Runtii waan ku faraxsanahay Muon Suite, inkasta oo aan u adeegsado KDE ArchLinux (iyo tan distoorku uma isticmaalo dpkg sida Debian iyo derivatives), runti waan ku faraxsanahay isticmaalayaasha Kubuntu iyo Debian. KPackageKit waa (aniga aragtidayda) waa wax laga yaqyaqsoodo, waxaa ka maqan fursado aad u tiro badan aakhirkiina dadka isticmaala waxay ku dhammeeyeen rakibida 'Synaptic haha'.
Xusuusnow inay jiri doonaan laba nooc oo ah Muon Suite, oo ah nooc "Lite" ah oo la mid ah Xarunta Ubuntu Software Center (oo la mid ah in loogu talagalay in lagu rakibo / la tirtiro codsiyada, loogu talagalay dadka cusub) iyo nooc kale oo aad u badan "pro" ama dhammaystiran , Waxaan u maleynayaa inay la mid noqon doonto Synaptic.
Sikastaba ha noqotee, waxaan u hambalyeynayaa adeegsadayaasha Kubuntu, runtii ... muddo dheer ayey ii jirtay tan iyo markii aan aad ugu farxay nooca Kubuntu 🙂
marka hore way fiicantahay in halkaan lagu qoro marka laga reebo qoraaga boostada, iyo in yar oo laxoojiyo, miyaanay ahayn in dib loogu laabto xumaanta Kde + Ubuntu? DoubleShit.
I rumee ... Waxaan isku dayay Kubuntu Lucid iyo Kubuntu Natty, waxaan qorsheynayaa inaan isku dayo Oneric beta1 hadda, laakiin ... waxqabadka kuwa aan isku dayay ayaa aad u xun. Marka: KDE + Ubuntu ma ahan tan ugu fiican.
Hadda ... ee ku saabsan trolling hehe ... AH kaalay, KDE waxay kuu oggolaaneysaa inaad sameyso waxyaabo badan oo ka badan Gnome, waa la sii hagaajin karaa, ugu dambayntiina, waxa muhiimka ah ayaa ah in isticmaalaha uu leeyahay suurtagalnimada inuu doorto waxa la sameeyo, sida loo sameeyo ama u qaabeeyo, iwm, iyo KDE waxay bixisaa fursado badan oo ka badan Gnome 😉
Maaddaama aan ahay troll aad u xun, marwalba waxaan dhahaa qof walba wuu sameeyaa wuuna adeegsadaa wuxuu rabo, faallooyinka waxaa loogu talagalay trolling, in kastoo hadaan haysto wax kde ah, waxaan dhahaa waa waxyeello kde 4.0, 4.1 iyo 4.2, laakiin waxaan rakibay 4.6 waxayna ka cuntay wax ka badan gnome 3.0 qol aan ahayn midka ugu fiican ee gnome, taas iyo caado.
Eh jidka ayaan ku arkay arintan MuyLinux
Taasi waa wax aanan kuu diidi karin, KDE (oo waxaan tijaabiyay ilaa 4.7.x) waxay cuntaa in ka badan Gnome2 iyo Gnome3 + Shell, taasi waa mid aan la inkiri karin.
Wixii ku saabsan xiriirka, waan akhriyay warka, haddii ay gacmahayga ku jiri lahayd waan ku deeqi lahaa anigoon ka fikirin laba jeer laakiin ... si aan uga fogaado faahfaahinta, waxaan kaliya kuu sheegi doonaa in mushaharka elav iyo kan aan haysto uu yahay oo keliya $ 15 PER MONTH, taasi kuma filna nool… marka sida iska cad ku-deeqidda ma gasho dheelitirka koontadayada.
Nepomuk wali ma arko adeegsi badan, aniga ahaan sida iska cad ... waxaan dareemayaa inay aad u badantahay, waan baabi'iyaa markii aan rakibayo hahaha.
Ma aqaan waxa aad shaqeyso markaa si aad u kasbato shiicadaas, waxaan aad uga shakisanahay inay ku shaqeysay wax ka yar € 1000 ...
Gal Buugga 'Canonical' si aad u aragto haddii ay lacag dheeraad ah kaa siinayaan HAHA
@ KZKG ^ Gaara: Ma inaan kugu siiyaa dharbaaxad gacan bir ah dadweynaha? Nacalad, mareegtaan wax shaqo ah kuma lahan dhaqaalaha, ama siyaasadda, marka aniga iigula raaxee nasiib darrada ah inaanan taaban arrimahaas ...
Ku saabsan KDE, waa hagaag, sheyga 'Semantic Desktop' wuxuu ku cunayaa lug. Akonadi, Nepomuk iyo Virtuoso waa masduulayaal .. Weli waan door bidaa Gnome 😀
U sheegida naftaada «iskuday barnaamij Qt» waxay la mid tahay adigoo dhahaya «ka bood buundada Segovia»
KDE + Ubuntu ma ahan tan ugu fiican
Waxaan u maleynayaa inuu qof igu raacayo
Had iyo jeer waan ku siiyay dhinacaas, Kubuntu ma ahan ikhtiyaarka ugu fiican meel fog ... Arch, Pardus, Chakra, xitaa Debian oo leh KDE waa xulashooyin ka wanaagsan.
Hadday sidaas tahay, maxaa ama maxaa, laakiin waxaa jira kuwa badan oo kaa caawin kara adiga oo ku deeqa wax bil kasta. Laakiin sidaan ku kashifay faallooyinkeyga (MuyLinux), lacag ayey rabaan laakiin kama faa'iideystaan ​​dhammaan fursadaha ugu badan.
Nacalad waxaad tahay mid ka mid ah Kderos-yada yar ee aan arkay anigoo garwaaqsan in kde uu cuno wax ka badan gnome, joer tan anigu ma aaminsani, waxa aniga aad iigu dhibaya kde waa dadka isticmaala oo dhahaya kde waa qumman yahay gnome-na waa shit 99% of kuwaan arkay hahaha
Haa, haddii ay sameeyeen xoogaa nidaamka deeqda SMS, ama wax fudud oo ka duwan PayPal, waxaan qiyaasayaa inay dakhli badan heli doonaan.
HAHAHA si fiican, markaan ku bilaabo anigu MA ihi qof indha la 'oo carrab la', waxaan aqoonsanahay wanaagga iyo xumaanta, Gnome2 waa fududahay, waxay leedahay waxa ay tahay inay ku haysato meesheeda, iyada oo aan lahayn dhibaatooyin badan, kaliya marka qof aad u faahfaahsan, wanaagsan ... KDE waxay leedahay wax badan ikhtiyaarrada loogu talagalay "qof". Tan iyo markii wax waliba aysan aheyn kuwa jilicsan, KDE waxay leedahay fursado badan, laakiin sida iska cad qiimaha waa Hardware. Waxay cuntaa RAM ka badan (qiyaastii 100MB ka badan) marka loo eego Gnome2.
Firefox waxaa loo cusbooneysiiyay 6.0.1 iyadoo la hagaajinayo u nuglaanta halista ah
ImgLikeOpera: Maamul sawirada xamuulka Firefox